Iinyanga ngesiNgesi. Leliphi igama elichanekileyo ngenyanga ngesiNgesi? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Iinyanga ngesiNgesi. Leliphi igama elichanekileyo ngenyanga ngesiNgesi?
NgoJanuwari kuya kuba ngesiNgesi uJanuwari, ukukhutshelwa: dnju () ri;
NgoFebruwari kuya kuba ngesiNgesi EyoMdumbaUkukhutshelwa: febru () ri;
NgoMatshi ngesiNgesi kuya kuba EyoKwindla, ukukhutshelwa; m: t;
U-Epreli uza kuba ngesiNgesi UTshazimpuziUkukhutshelwa: i-eipr () l;
UMeyi uza kuba ngesiNgesi UCanzibe, ukukhutshelwa: mei;
NgoJuni kuya kuba ngesiNgesi Isilimela, Ukukhutshelwa: du: n;
KaJulayi uzakuba ngesiNgesi EyeKhala, uxwebhu: ukuhlalai;
UAgasti uya kuba ngesiNgesi EyeThuphaUkukhutshelwa: gst;
NgoSeptemba ngesiNgesi kuya kuba EyoMsintsiIsiprinta septemb;
Ngo-Oktobha ngesiNgesi kuya kuba EyeDwarhaukukhutshelwa ktub;
NgoNovemba kuya kuba ngesiNgesi EyeNkanga, Ukukhutshelwa kwe-nuvemb;
UDisemba ngesiNgesi uza kuba EtiMngaidiski yokukhuphela.
Iinyanga zobusika - NgoDisemba / kuJanuwari / uFebruwari
Intwasahlobo inyanga ezintathu - Ngomhla / Epreli / Meyi
Iinyanga ezi-3 zehlobo elishushu - NgoJuni / Julayi / Agasti
Ukuqanda Autumn - NgoSeptemba / Oktobha / Novemba
Le ndlela zibhalwa ngayo iinyanga ngesiNgesi
Ke kufuneka uzifunde kwaye ukhumbule ukubala
Iinyanga ezili-12 ngesiNgesi nangesiRashiya ngolandelelana:
NgoFebruwari -Februwari 2.
Ngale ndlela ke amagama abhalwe ngazo zonke iinyanga ezilishumi elinambini zonyaka abhalwa ngesiNgesi.
NgoJanuwari sibhala ngoJanuwari.
NgoFebruwari siza kubhala ngoFebruwari.
NgoMatshi sibhala ngoMatshi.
Ngo-Epreli siza kubhala ngo-Epreli.
NgoJuni siza kubhala ngoJuni.
NgoJulayi kubhalwa ngoJulayi.
UAgasti uza kubhalwa njengo-Agasti.
USeptemba upelwe ngoSeptemba.
Ngo-Okthobha siza kubhala u-Okthobha.
NgoNovemba kubhalwa ngesiNgesi njengoNovemba.
Kwaye uDisemba ubhalwe uDisemba.
Ngendlela, amanye amagama esiNgesi, bobabini ababhinqileyo nabesilisa, athatyathwa amagama eenyanga kwaye evakala emhle kakhulu: UMarta, uAgastia ngo-Epreli.
Ukuba unengxaki yokubhala iinyanga ezilishumi elinanye zonyaka, ke ungasebenzisa eli cwecwe. Le thebhile iqulethe zonke iinyanga ezilishumi elinambini kwaye kulula kakhulu ukuyiqonda kwanakomfundi wokuqala ofunda ulwimi:
Kunyaka Iinyanga ze12. Bhalela ku SiNgesi Zonke iinyanga ezilishumi elinambini:
Inyanga yokuqala yonyaka: kuJanuwari ngesiNgesi: kuJanuwari
Kwinyanga yesibini: uFebruwari ngesiNgesi uya kuba ngu--Februwari
Inyanga yesithathu (ukuqala kwentwasahlobo): Matshi ngesiNgesi-Matshi
Inyanga yesine: Epreli ngesiNgesi: Epreli
Inyanga yesihlanu: ngoMeyi ngesiNgesi: Meyi
Inyanga yesithandathu (ihlobo sele selikho, iholide): uJuni uza kuba ngesiNgesi-Juni
Inyanga yesixhenxe: kuJulayi ngesiNgesi: Julayi
Inyanga yesibhozo: Agasti ka-Agasti: Agasti
Inyanga yesithoba (ixesha esiya esikolweni, ekwindla): NgoSeptemba ngesiNgesi iya kuba ngu-Septemba
Inyanga yeshumi: Okthobha ngesiNgesi-Okthobha
Inyanga yeshumi elinanye: uNovemba ngesiNgesi uya kuba ngu-Novemba
Kwinyanga yeshumi elinambini (ubusika, kungekudala uNyaka oMtsha): uDisemba ngesiNgesi: uDisemba
NgoJanuwari, ngoFebruwari, ngoMatshi, nge-Apreli, ngoMeyi, ngoJulayi, ngoJulayi, nge-Agasti, ngo-Okthobha, ngo-Okthobha, ngo-Disemba. KwisiNgesi, ngokungafaniyo neRussia, amagama eenyanga apapashwa. Mamela ukubizwa kwala magama kwisichazi-magama sika-Abby Lingvo .Konwabele ukufunda!
Ukubhala amagama eenyanga ngesiNgesi ngokuqinisekileyo ayisiyiyo incwadi yaseTshayina, bayaziwa:
Umgca wokuqala: Januwari -Februwari
Umgca wesibini: Matshi-Epreli
Umtya wesithathu: Meyi-Juni
Umtya wesine: Julayi-Agasti
Umgca wesihlanu: Septemba-Okthobha
Umgca wokugqibela: Novemba-Disemba
Ubizo lweenyanga sisihloko esinzima kakhulu. Umahluko phakathi kweAmerican neBritani iyantlukwano azibalulekanga, ukuba awuyazi ukuba yeyiphi ekufuneka uyilandele, qhubeka kwinto elungele wena, kuba nakuphi na ukubiza amagama ezahlukeneyo kunokuba iTambov.
Ukunceda abo banqwenela ukubeka ibinzana elichanekileyo, ndinikezela ngeevidiyo ezininzi, enye enika ingxelo yaseBritane:
Apha, kwanezandi ezizodwa zichaziwe.
Apha bahlala ngumahluko kwiisistim ezixinzelelweyo nezingabhadwanga ngokomzekelo wamagama weenyanga.
Uluhlu nje ngokulandelelana oluchanekileyo kunye nesenzi saseBritani.
Nantsi, iinyanga ezili-12:
Ukwazi amagama eenyanga kulula kakhulu, amagama (ngokuchaza) aqagela ngokulula. Naxa ufunda, jonga indlela efanayo amagama Russian kunye IsiNgesi. Ndicinga ukuba emva kokufunda amaxesha aliqela unokuzifunda ngaphandle kweengxaki.
Ngokuqala konyaka wesikolo, lo mbandela ufumana ukuthandwa phakathi kwabafundi.
Ngaphandle kwento yokuba isiNgesi kunye nesiRussia zilulwimi ezahlukeneyo ngokupheleleyo, amagama eenyanga kwezi lwimi anegama elifanayo lokubiza amagama, umzekelo, uMeyi noMeyi.
Ukufumanisa igama leenyanga, kunye nopelo kunye nokukhutshelwa, ungabhekisa kolu luhlu.
Kumzobo ongentla, amagama eenyanga zonyaka anikezelwa ngamaxesha onyaka, kodwa inyanga yokuqala yonyaka nguJanuwari * kuJanuwari *, alandelwe ngu -Februwari *-* -Februwari *, emva koko ngo-Matshi *-* -Matshi *, alandelwa nguMatshi-Epreli * -Epreli * , * Meyi * -I * Meyi *.
Kule nto, iinyanga zentwasahlobo ziphela kwaye ihlobo liyaqala: * -Juni--UJuni *, * -Julayi * -Julayi *, * -Agasti *-* -Agasti *, emva koko iinyanga ezisekwindla: * Septemba--Septemba *, * -Okthobha *-* Oktobha *, * Novemba *-*Novemba *.
Kwaye inyanga yokugqibela yonyaka ebusika - * -Disemba *--Disemba *.
Ayingobantwana kuphela esikolweni, kodwa wonke umntu, akuyi kwenzakalisa ukwazi ukuba zonke iinyanga ezilishumi elinanye zonyaka ziya kuba zisiNgesi. Rhoqo iikhalenda ziba neenyanga ezichongiweyo kolu lwimi, kungcono ke ukukhumbula la magama esiNgesi.
Ukuze ukhumbule ngcono, kunjalo, kungcono ukuba nemifanekiso ebonakalayo phambi kwamehlo akho.
ngokuchazwa kwamaxesha onyaka:
Unyaka uqala ngoJanuwari okanye ngesiNgesi kuJanuwari, emva koko inyanga yesibini nguFebruwari okanye uFebruwari, njl. Unyaka wekhalenda uphela ngoDisemba okanye, ngesiNgesi, ngoDisemba.
Kuyimfuneko kuphela ukuba ukhumbule ukuba ngesiNgesi amagama azo zonke iinyanga zonyaka mababhalwe nge-capital, oko kukuthi, unobumba omkhulu.
Iinyanga ngesiNgesi zezi:
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,396.